IKapa liphelelwa ngamanzi ngenxa yesomiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IKapa liphelelwa ngamanzi ngenxa yesomiso
IsiJalimane Portillo | | Isomiso
Isomiso esinyuswe yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu senza ukuthi, EKapa, okuyidolobha lesibili ngobukhulu eNingizimu Afrika nenhliziyo yezokuvakasha kuleli, kubalwa ukuphela kwamanzi.
Uma izivakashi nabahlali baseKapa bengakunciphisi kakhulu ukusetshenziswa kwabo, idolobha lizophelelwa ngamanzi ngo-Ephreli 12. Yidolobha lokuqala lesimanje ukuphelelwa ngamanzi. Ngabe uhlose ukubhekana kanjani nalesi simo?
1 Usuku zero
2 IKapa ngaphandle kwamanzi
Usuku lwango-Ephreli 12, 2018 lubizwa nge- "Day Zero". Yilolo suku lapho, uma imikhuba yokusebenzisa izakhamuzi zayo kanye nezivakashi ingashintshwa, idolobha lizophelelwa ngamanzi. IKapa linamandla angu-13,5% futhi ngenxa yesimo sesomiso esibi nokwanda kokuhwamuka kwamanzi okudalwa amazinga okushisa aphezulu, ukuncipha kwamanzi sekusondele.
Uma ukusetshenziswa kunganciphi, idolobha lizophoqeleka ukuthi liphazamise ukusatshalaliswa kwamanzi. Yize kunemizamo, umnqamulajuqu kuze kufike uDay Zero awuhlali nje usongo olungenzeka, kepha ubulokhu ufushane.
Isinyathelo esethulwe yiziphathimandla endaweni ukulwa nenkinga yesomiso ukuthi izakhamizi zidla kuphela ubuningi bamalitha angama-50 umuntu ngamunye ngosuku. Lokhu kunciphisa okukhulu, kucatshangelwa ukuthi ishawa yemizuzu engu-5 isebenzisa amalitha amanzi afinyelela ku-100, ngokusho kwe-WHO.
Isomiso esikhungethe le ndawo yinto engavamile ngoba asitholi nje kuphela ukuntuleka kwemvula okukhombise inkathi yemvula edlule (ngo-Ephreli-Okthoba), kodwa futhi nasezingeni lokuthi imvula ibiphansi kakhulu eminyakeni emibili edlule.
IKapa ngaphandle kwamanzi
Izibikezelo zesimo sezulu azimemezeli imvula kuze kube ngu-Ephreli. Iziphathimandla zigcina i-halo yethemba lokuthi lezi zimvula zizofika ngaphambi kwesikhathi futhi zigcine iminyango ivulekile kwezokuvakasha, yize isikhathi sokuvakasha esiphezulu siqondana nezinyanga ezome kakhulu zonyaka.
Eminyakeni emibili nje edlule, idolobha lisebenzise amalitha amanzi ayi-1.200 billion. Kusukela namhlanje, lokho kudla kunqunywe ngesigamu. Ngokusho kukaTim Harris, umqondisi omkhulu we-Official Agency for the Promotion of Tourism, Trade and Investment, lo mcimbi wesomiso owedlulele wenzeka kanye kuphela eminyakeni eyinkulungwane futhi, ngakho-ke, uyalungiswa ekusetshenzisweni kwamanzi.
Yize isomiso sihlasela idolobha, inkathi yezivakashi ibe yinhle kakhulu. UHarris uqinisekise ukuthi noma iZero Day ifika futhi ompompi beyeka ukusebenza ezindaweni zokuhlala, amahhotela azoba phakathi kwamabhizinisi azoqinisekiswa ukusebenza kwawo.
Futhi yini engcono, sesibonile impendulo engakholeki evela kubavakashi yokonga amanzi. Bajoyine imizamo ngomdlandla, babonile ukuthi bangaba yingxenye yesisombululo ngokujoyina umoya waseKapa, ​​”kugcizelela uHarris.
Kuma-dollar ayizigidi ezingama-25.637 (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-20.615) esifundeni esangena ngalo mkhakha ngo-2016 (ngokusho kombiko wango-2017 wombiko othi "UNWTO Panorama Wezokuvakasha Komhlaba Wonke"), izigidi eziyi-7.910 (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-6.360) ingezwe ngeNingizimu Afrika (30,85%).
Ezokuvakasha eKapa ziya ngokuya zanda futhi zithandwa. Ngo-2017, Izivakashi eziyi-1,3 million zivakashele leli dolobha. Kumele kubalulwe nokuthi isomiso sithinta kuphela ingxenye yaseWestern Cape. Kunezindawo eziningi lapho kunamanzi amaningi khona.
Njengoba ukwazi ukubona, isomiso sihlasela izindawo eziningi emhlabeni wonke futhi imiphumela emibi kakhulu isivele isondele. Izixazululo ezinjengokwehlisa ukusetshenziswa kwamanzi zivikela kuphela ngoba, uma lingani ngokwanele, kuyisikhathi ngaphambi kokuba amanzi aphele. Ngakho-ke, ukwakhiwa kwezinqubomgomo ezisiza ukuphatha amanzi kubaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » IKapa liphelelwa ngamanzi ngenxa yesomiso
Izilwane ezincelisayo nezinyoni zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nokushintsha kwesimo sezulu
Amafu e-cirrus akha kanjani futhi abikezela ini?